Yaiva Ma'anshan National Economic uye muruzivo rwokugadzira Development Zone uye sezvo rimwe munyika kutungamirira mapoka mumunda metallurgia michina kugadzira, Taier Heavy Industry Co., Ltd. rakaumbwa muna 2001, aine vakanyorwa guta mamiriyoni 449,35 Currencykuva. The Company majors pamasikiro, kukura, kugadzira, yokutengesa uye basa maindasitiri yezvisikwa mugodhi, giya coupling, Sheari chipande, zvishoma nezvishoma mumatope ndiro, mandrel, compactor, motokari-yedzimudzangara mugodhi, motokari kupembedza mativi uye zvichingodaro. Kambani akava kambani akanyorwa muna 2010, pamwe wemari code: 002347.
Taier wakasika munhu metallurgia indasitiri ukoshi cheni kuburikidza kuvhurika uye kugoverana, uye vakazvipira ava nyika-kirasi yemhando michina mugadziri, neimwewo makaita basa Provider metallurgia indasitiri renguva upenyu kutenderera uye akachenjera simbi chirimwa mhinduro Provider. Taier akunda kuvimba uye pamwe vatengi pamwe akaramba-kunowedzera utsanzi mano, uyewo kwezvipimo, kutsanya uye tigone kushanduka basa womuenzaniso.
Pari, Taier rava boka China Iron uye Steel Association Metallurgical Equipment Branch, mutevedzeri sachigaro chairema China General Machinery Industry Association, mutungamiri chairema yedzimudzangara coupling bazi, mutevedzeri wapurezidhendi chairema China Heavy Machinery Industry Association rinorema nheyo zvikamu mutevedzeri wapurezidhendi bazi, mutungamiri chairema China Iron uye Steel Industry Association. It aita anokudza kuti National-chechetere zvebhizimisi michina centre, imwe yenyika post-doctorate workstation, uye metallurgia midziyo remanufacturing academician workstation. It akagadza National Enterprise Technology Centre, National Postdoctoral Workstation uye Metallurgical Equipment Remanufacturing Academician Workstation, uye akawana mukurumbira Chinese vanozivikanwa, Patent Excellence Award of China, ehurumende-pamwero chibvumirano-nokukudza uye zvikwereti zvebhizimisi, National Michina utsanzi womuenzaniso Enterprise, etc .
Taier akaita vakanamatira zvemichina kutungamirirwa uye kusimbiswa firimu, kudzidza uye kutsvakurudza kwadzinoita vakazvimirira utsanzi, pamwe negore okutengesa kwemari 5% paakapiwa pakutsvakurudza uye kukura; kuziva vatengi kukosha, Taier akagadza 4S Marketing basa womuenzaniso ndokuisa ukoshi kuburikidza yose gadziriro chigadzirwa lifecycle Kutarisira uye basa; yaibatana kuvimba utariri, uye zvakazara vakaziva digitaalinen, rinoonekwa uye mashoko kutarisirwa yose muitiro kupa vatengi pamwe yepamusoro unhu zvinhu uye mabasa.
With kukosha utariri womuenzaniso zvakasikwa, makwikwi uye kubudirira sezvo chinoumba zvebhizimisi Kutarisira, Taier anga akaita Customer, wedzerai cheni, kambani, mushandi ukoshi kugoverwa kuziva kukosha kugoverana uye zvakafanana kukura. Taier anoedza kutungamirira chikwata yokutsaurira, Entrepreneurship, pamwe mweya uye kutungamirira bhizimisi rwokugadzira uye kutarisirwa utsanzi ayo tsika. Taier ave achishingaira chikamu paruzhinji zvakanaka mabasa China Charity Federation, China Red Cross, etc. pamwe simba pfungwa mumagariro basa.
Yekudzidza yemberi, mweya "kutarisira zvebhizimisi pamwe zvakarurama uye nesimba, kubudirira zvakaisvonaka", Taier icharamba vachifambira mberi uye utsanzi kukudziridza pacharo mu "International Taier", "Century Taier".
Muna 2000, Maanshan Taier Heavy Industry rakavambwa;
Muna 2002, yokutanga mudzimba yezvisikwa kwemajoini mugodhi akasiyira chikuru ngarurege kubva musono nepombi kuboora muchina wanunurwa (Baotou Steel 180);
Muna 2003, yokutanga mudzimba hombe crowned mazino giya coupling nokuti chando rinopfungaira wanunurwa (No.2 Cold Rolling Mill pamusoro Wuhan Iron & Steel (Group) Co., Ltd.).
Muna 2004, boka raiva zita rokuti Anhui Taier Heavy Industry Co., Ltd .;
Muna 2005, yokutanga mudzimba 1700 kupisa kuramba rinopfungaira pamusoro Jigang akanga vakazvimiririra revatema, Taier inozviita kuti kubudiswa vemunyika inorema-basa yezvisikwa kwemajoini mugodhi uye coupling (Ansteel anotungamirira, achibatsirwa CFHI, Shanghai Machinery Equipment Co., Ltd. );
Muna 2007, boka akasaina inokosha pamwe chibvumirano ne China First Heavy Industries (CFHI)
Muna 2008, boka akasaina inokosha pamwe chibvumirano ne Shougang Group
Muna 2009, kambani akasaina inokosha pamwe chibvumirano ne Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd
Muna 2010, ungano yakanga akanyorwa uye ave mutungamiri indasitiri
Muna 2010, boka akabvumirwa kuva anokosha Hi-Tech zvebhizimisi kuti China tochi Program.
Muna 2012, fekitari mutsva Taier akanga pamutemo kupinzwa kushandiswa;
Muna 2012, boka vakagamuchira "National May 1st Labor menduru"
Muna 2013, boka Yakazopiwa zita rokuti sezvo pasina administrative nokupesana zvebhizimisi zita: Taier Heavy Industry Co., LTD.
Muna 2016, Taier Group rakavambwa
Muna 2018, paunonoongororwa akanga paakavapa "National Laboratory zvinodiwa" (CNAS rabhoritari accreditation)
Musi waMarch 27, 2019, danho rokutanga chirongwa Anhui Taier Surface Engineering Technology Co., Ltd. yakapedzwa ndokuiswazve kugadzirwa.